Mareykanka oo ka hadlay xaaladdii ugu dambeysay ee weerarka saldhigga Manda Bay | Xaysimo
Home War Mareykanka oo ka hadlay xaaladdii ugu dambeysay ee weerarka saldhigga Manda Bay
Mareykanka oo ka hadlay xaaladdii ugu dambeysay ee weerarka saldhigga Manda Bay
Taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ee AFRICOM ayaa xaqiijiyey in kooxda Al-Shabaab ay weerar kusoo qaadeen saldhigga Manda Bay ee gobolka Lamu, islamarkaana ciidamada Mareykanka iyo Kenya ay iska caabiyaan weerarka Al-Shabaab.
Bayaan kasoo baxay AFRICOM ayaa lagu yiri “Anaga oo la shaqeeneyna saaxiibadeena Kenya, saldhigga ciidamada cirka waa la nadiifiyey, waxaana weli socda hanaan si buuxda loogu sugayo.”
AFRICOM ayaa sheegtay in war-saxaafadeedyo dhowr ah oo Al-Shabaab ay kasoo saartay dhacdadan ay yihiin kuwa lagu buun-buuninayo xaaladda amniga ee saldhigga. “Dhaqankan waa mid caadi u ah ururkan argagixiso.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
“Waa muhiim in loogu jawaabo Al-Shabaab halka ay taagan yihiin, si looga hortago faafitaanta kansarkan,” Ayuu yiri Gayelr.
“Al-Shabaab waa urur argagixiso oo aan arxan lahayn. Waa koox ku xiran Al-Qacida oo raadineysa inay dowlad Islaam ah ka aas-aasaan Bariga Afrika, si ay meesha uga saaraan saameynta reer galbeedka iyo fikradahooda ee gobolka. Joogitaanka Mareykanka ee Africa waa u muhiim dadaallada looga hortagayo aragixisada.” Ayuu yiri Gayler.
AFRICOM waxay sheegtay in qiimeyn horudhac ah ay muujineyso inay waxyeelo gaartay qalabkii yaallay saldhigga, islamarkaana ay socoto qiimeynta shaqaalaha saldhigga.